कांग्रेसले विपीको मेलमिलाप नीतिलाई अनुसरण गर्ने की ? – Nepal Tara Nepal Tara
कांग्रेसले विपीको मेलमिलाप नीतिलाई अनुसरण गर्ने की ?
काठमाडौंः हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व सम्हाल्दै आएको नेपाली कांग्रेसको अगाडि एउटा चुनौती खडा भएको छ । आफ्ना आन्तरिक कमि कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र यसैको जगमा मुलुकको लोकतन्त्रलाई सवल, सक्षम र मजबुद बनाएर अघि बढ्ने । कांग्रेसले अब पनि यो विषयमा समिक्षा गरेन र सोचेन भने मुलुककै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको छवि बनाएको कांग्रेसको अस्तित्व माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ ।
नेपालको प्रजातान्त्रीक आन्दोलनका धरोहर महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अगाडि सारेको मेलमिलापको नीती नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको हरेक कालखण्डमा सान्दर्भिक बन्दै आएको छ । महामानव वीपीले देखेको सपना पुरा गर्न कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला माथि पार्टी भित्र देखिएको आन्तरिक द्वन्दलाई व्यवस्थापन गरी पार्टी भित्र आपसिक सद्भाव, भातृत्व र बन्दुत्वको भावना सृजना गराई दिर्घकालीन आन्तरिक मेलमीलापको वातावरण सृजना गराउनु पर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।
कांग्रेसले फागुन २१ मा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा यसले सबैको ध्यान खिचेको छ । के कांग्रेसले सर्बसम्मत रुपमै दलको नेता छनोट गर्न सक्ला ? वा चुनवी प्रक्रियामै जाला ? यो विषयले राजनीतिमा चाख राख्ने सबैमा कौतुहलता पैदा गरेको छ ।
दलको नेता बन्नका लागि सभापती शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंहले उमेद्वारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरुले विभिन्न कार्यक्रममा दलको नेताका लागि दावी पेश गर्दै आएका छन् । तर, दुबै नेताले दावी पेश गरे पनि सच्चिकै चुनावी मैदानमा दुबै उत्रिएलान वा सहमती होला ? यो भने फागुन २१ गते नै थाहा होला ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोईरालाले नवनिर्वाचित सांसदलाई शुभकामना दिन आ–आफ्नो निवासमा आयोजना गरेको चियापान र लञ्च पनि दलको नेता चयनकै सिलसिलाको लागि भएको सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ । पौडेलको चियापानमा देउवा नजानु र शशांकको चियापानमा गएर आफू दलको नेता बन्ने बताउनुले पनि देउवा अझै पनि दलको नेता बन्ने दौडमा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
महामन्त्री कोइरालाले पनि आफू दलको नेता बन्ने आकांक्षा प्रकट गरेका छन् तर उनी मध्यमार्गी धारमा गएर देउवा र प्रकाशमानलाई मिलाएर सर्वसहमत नेतृत्वको लागि प्रयत्नशील छन्। चुनाव नै नगरी सर्वसहमत रुपमा दलको नेता चयन गर्न सकेमा मात्रै कांग्रेसलाई आगामी दिनमा अझै सशक्त बनाएर लैजान सकिने धारणा उनको छ ।
कांग्रेसमा सभापति देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको देखिएपनि नेताहरुको ब्यक्ति र विचार परिर्वतन गर्ने प्रवृती मौलाउदै गएको अवस्थामा अन्तिम समयमा कुन नेता कसको पोल्टामा पुग्नेहुन् र कुन नेताले सांसदहरुलाई कसरी प्रलोभन र आश्वासनको भुमरीमा पार्ने हुन् त्यो आगामी दिनले प्रष्ट पार्ने छ ।
कांग्रेस प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता बोक्दै आएको लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो, यसका आफ्नै वलिदान र संघर्षहरु छन् । कुनै बेला स्पष्ट रुपमा दुई तिहाई सिट जित्न सफल भएको पार्टी अहिले आएर दोस्रो पार्टीका रुपमा पनि आफूलाई चिनाउन बाध्य छ ।
अझै प्रत्यक्ष तर्फको नतिजा हेर्ने हो भने त उ तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । आमनेता र कायकर्ताको लहड र संगठन विस्तारमा कुनै समय राम्रो छाप परेको र कुनै समय नेतृत्वको कमजोरी र संगठन भित्रका आपसी हानथापले खुम्चिदै र फुक्दै गएकै कारण पछिल्लो निर्वाचनमा पनि निशासाजनक नतिजा हात पार्नु पर्यो ।
नेताहरु भित्रको गुट–उपगुट, नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको नैराश्यता, सरकारमा रहेका बेला गरिएका केहि अलोतान्त्रिक निर्णयहरुले नै चुनावी परिणाम सोचे अनुरुप नभएको कार्यकर्ताको गुनासो छ । कोइरालाले आफू जसरी मध्यमार्गमा देखिन खोजेका छन् त्यसरी नै उनले देउवा धार र पौडेल धारलाई मिलाएर लैजाने क्षमता राख्नु पर्दछ ।
सम्पूर्ण नेताहरुलाई सुझबुझ तवरले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान सक्नुपर्दछ । कोइरालाले यो मध्यमार्गी धारमा पार्टीलाई जोड्न सके भने भोलीका दिनमा उनको विरासद र पार्टीको प्रभाव पक्कै पनि बढेर जानेछ ।
नेतृत्व सधै एउटै ब्याक्तिमा निहित रहनुलाई पनि राम्रो मान्न सकिदैन । समय परिर्वतन संगै नेताहरुको प्रवृती र नेतृत्व परिवर्तन हुनु जरुरी छ । सभापतिका हैसियतले देउवाले पार्टीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ । बिभिन्न समूहमा बिभाजित गुटहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्याउनु जरुरी छ ।
दलको नेता छनोट गर्दा सर्बसहमत गर्नु कांग्रेसको लागि उपयुक्त बिकल्प हुन सक्छ । वाम गठबन्धनले सरकार चलाइरहदा बलियो प्रतिपक्षको रुपमा आफूलाई देखाउनु जरुरी छ । सदनमा सदैव सरकारलाई संयोजित र सुसुचित गर्दै अगाडी बढाउन वहस गर्नु जरुरी छ ।
कांग्रेसले दलको नेता सर्वसम्मत रुपमा छनोट गर्न सकेमा कांग्रेसलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सकारात्मक भाव पैदा गर्न सक्छ । कांग्रेसका युवा नेताहरुले भनेझै दलको नेता सर्वसहमतिमा टुङ्याइनु पर्दछ जसले गर्दा कार्यकर्तामा नयाँ जोश जाँगर थप्न सक्छ ।
बिभिन्न भातृ संगठनहरुमा पनि सकारात्मक सन्देश पैदा हुन सक्छ, पार्टीलाई आगामी दिनहरुमा अझै संगठित, बलियो र जुजारु बनाउदै देशकै पहिलो शक्तिको रुपमा उभ्याउन टेवा पुर्याउनेछ । त्यसैले सहमतिको विकल्प छैन, सहमतीमै कांग्रेसले दलको नेता छानोस् र आम नेपाली जनमानसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकोस् शुभकामना ।